3D Scanner, System ODM, Card Control - FEELTEK
3D Scanner-Serial Green
Makà santionany sy boky misy sary maimaimpoanaMandehana
FEELTEK dia nifantoka tamin'ny rafitra fifantohana mavitrika 3D nandritra ny taona maro. Manamafy hatrany izahay ny fizarana ny fibaikoana ny lozisialy, ny famolavolana optika mandritra ny zava-bita sy ny fanatanterahana ny fampiharana.
Nandritra izay taona maro lasa izay, FEELTEK dia manolo-tena amin'ny paikadin'ny "Famolavolana laser laser mitarika zava-baovao" ary nandefa serials scanner 3D manohana ny halavan'ny 10640/1064/980/532 / 355nm miaraka amin'ireo safidin'ny habeny aperture 10/15/20/30 / 40/70 mankany amin'ny tsena.
Amin'ny maha mpiara-miasa manan-danja amin'ny fampidirana laser fanodinana, ny FEELTEK dia nampiditra zava-dehibe hatrany ny famolavolana vahaolana
Solomaso aspherika vaovao, angovo mifantoka kokoa ary fanamiana. Safidy halavan'ny onjam-peo maro sy ny saha miasa
Precision avo lenta
Haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha ambany. Haingam-pandeha, fanaraha-maso galvanometa hafahafa ambany. Ny teknolojia fanaraha-maso fiara tsy manam-paharoa
Rindrambaiko fampiharana novolavolain'ny tena. Manome karazana vahaolana mahazatra mifototra amin'ny teknolojia fifantohana mavitrika: fanamarihana toerana misy eo amin'ny toerana, fanamarihana tsipika mihetsiketsika an-tsaha, fanamarihana ny endrika ambonin'ny 3D, sokitra fanamaivanana, fanamafisam-peo 3D, fitaovana additive sy subtractive, sns.
Rafitra fanaraha-maso novolavolain'ny tena Loharano loharanom-pifandraisana maro. Robot Interface, CCD, Moving Line, manome fahafaham-po ny fampiharana ny fifehezana.
FEELTEK no ho mpiara-miasa aminao manan-danja amin'ny fanaingoana ny rafitra galvo 2D mankany 3D
Omeo rafitra mifantoka mavitrika haingam-pandeha, haingam-pandeha, haingam-pandeha avo lenta, famolavolana lalana optika misy patanty
FEELTEK dia nanangona rafitra 2D marobe sy traikefa fanamboarana 2.5 D scanheads koa.
Fandanjana manokana ny programa
Mpiara-miasa iray amin'ny fitaovana fanodinana laser galvanometra, manome lanja lehibe ny vahaolana vita amin'ny doka
bobongolo miabo / miiba
Fanamarihana sary amin'ny amboara (aluminium)
Fanesorana fitaovana Auto-hub
avy amin'ny adminJan-29-2021
Ahoana raha tsy 2D fotsiny ...
Ho fanampin'ny scanhead FEELTEK 2D, raha jerena ny fahafaha-manao sy ny manovaova, dia manolotra safidy maodely marobe ho an'ny mpanjifa mikendry ny hanao ...
avy amin'ny adminJan-22-2021
FEELTEK Famaritana marika amin'ny m ...
Mihabetsaka ny fangatahana momba ny fanamarihana marika amin'ny faritra mekanika, indrindra amin'ny indostrian'ny fiara, toy ny hub, batterie moto, sivana rivotra sns ...
avy amin'ny adminDes-21-2020
Merry Christmas and Happy N ...
Ho avy tsy ho ela ny 2021 Andao isika rehetra hifampikarakara sy hanohana ny filan'ny tsirairay fahasalamana, sakafo atoandro ary fanambinana. FEELTEK wis ...
FEELTEK dia manolotra 2D, 2.5D, scanner 3D, DFM (Module Dynamic Focus), modely XY OEM ary koa fanaingoana rindrambaiko.
Miaraka amin'ny mpamatsy ny rafitra scanhead amin'ny ankapobeny, mino izahay fa ny FEELTEK no ho mpiara-miasa azo alain-tahaka ho an'ny scanner 2D ka hatramin'ny 3D.
© Copyright - 2010-2021: FEELTEK Laser Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.